Ogaden News Agency (ONA) – Jabhada Ginbot 7 oo Shir Kuqabatay Gudaha Addis Ababa.
Jabhada Ginbot 7 oo Shir Kuqabatay Gudaha Addis Ababa.
Jabhada Ginbot 7 Arbanyoj oo kadagaalami jirtay Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ayaa kulan balaadhan kuqabatay badhtamaha magaalada Addis Ababa, halkaas oo ay kula hadleen taageerayaashooda.
Jabhada Ginbot 7 ayaa heshiis lasixiixatay maamulka cusub ee wadanka Itoobiya ee uu hogaamiye Abiye Axmed, waxayna Jabhadu qaataday in ay qoriga dhagaan oo ay qalin ku halgamaan kadib markay arkeen maamul qalin lagula halgami karo.
Jabhada Ginbot 7 oo iyadu aaminsan midnimada Itoobiya ayaa udagaalami jirtay xuquuqda Gobolka Axmaarada iyo waliba sidii wadanka loogu heli lahaa maamul cadaalad ah oo dadka isku wada, waxayna Jabhadu kasoo horjeeday maamulkii cunsuriga ahaa ee Tigreegu ay madaxda ka ahaayeen.
Madaxda Jabhada oo kulanka shalay kasoo qayb gashay ayaa dadaynaha usheegay ujeedadooda iyo barnaamijkooda siyaasiga ah, waxayna madaxdu taageerayaashooda usheegeen in ay furayaan xisbi siyaasi ah oo kaqayb gala doorashooyinka iyo madaxtinimada wadanka.
Jabhada Ginbot 7 ayaa taageero balaadhan kahaysata shacabka Axmaarada oo ah qoomiyada 2aad ee wadanka ugu tirada badan, waxayna jabhadu taliskii talada laga faramaroojiyay ee wayaanaha kuqasabtay in ay maamulaan dhulka miyiga ah ee Gobolka Axmaarada.
Shacabka Axmaarada ayaa taariikh ahaan ah dad mudo dheer soo xukumi jiray wadanka isla markaana ah dad isku dooban oo maamul kooda kadambeeya, waxayna maalintii shalay muujiyeen sida ay ula dhacsan yihiin aragtida iyo barnaamijka siyaasiga ah ee Jabhada.